I-Sand Dollar Villa ngaselwandle eBoca Chica Panama - I-Airbnb
I-Sand Dollar Villa ngaselwandle eBoca Chica Panama
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguRafael
Sand Dollar Villa ngaselwandle
Le ndawo intle, yabucala kakhulu ineembono zepanoramic kunye nokufikelela ngokuthe ngqo kulwandle oluhle kunye nebheyi ekhuselekileyo. Ifumaneka eBoca Chica, yimizuzu engama-45 kuphela ukusuka kwisixeko esikhulu sesibini sasePanama, uDavid.
Ukusuka emnyango wakho, ungonwabela ukutsiba-tsiba kwisiqithi kwiziqithi ezingakhange zibonwe, okanye unokukhetha ukuntywila elangeni kulwandle lwakho lwabucala.
ISand Dollar Villa ibonelela ngokuhombisa okugqibeleleyo kokuphila ngobabalo kunye nokonwabisa kwisimo somlingo!
Igqitywe ngo-2015, iSan Dollar Villa ibonelela ngezona ndawo zibalaseleyo zale mihla, kubandakanya ithala elinomtsalane eligqunyiweyo kunye nedama lokuqubha elinemibono etshayelayo yoLwandlekazi lwePasifiki kunye neziqithi zaseChiriqui, kunye nokutshona kwelanga okumangalisayo.
Ikhitshi ye-gourmet eyenziwe nge-Scavolini ixhotyiswe ngokupheleleyo nge-hardware ephezulu yabapheki abasakhulayo. Igumbi lokutyela eliphangaleleyo kunye negumbi lokuhlala, elinesilingi eziphakamileyo ezikhazimlayo, libonelela ngembono entle yolwandle kwaye linokuhlala kamnandi iindwendwe ezisibhozo.
Amagumbi okulala amabini aneebhedi ezilingana nokumkanikazi kunye negumbi lokuhlambela eline-ensuite atyunjwe ngobunewunewu. Kukwakho ne-suite yeendwendwe eqhotyoshelweyo enokufikelela ngasese, ebandakanya igumbi lokuhlala, igumbi lokulala eliphindwe kabini kunye negumbi lokuhlambela eligcweleyo.
Ipropathi ikwabandakanya igaraji ephindwe kabini, kwaye inejenereyitha esebenza ngokuzenzekelayo ekwinqanaba eliphezulu. Irhangqwe ngamabala amahle anomhlaba onezinyuko ezikhokelela elunxwemeni.
-I-Island Hopping: sikwiPaki yeSizwe yaseLwandle yaseChiriqui, inkitha yeendawo ezinamatye amahle afafazwe kulo lonke igophe, kunye neziqithi zayo ezintle ezigqunywe ehlathini kwaye zineentende zekhokhonathi ezibhityileyo. Uninzi lwezi ziqithi luqhayisa ngonxweme olunentlabathi emhlophe eneparadesi eshushu ezele ngamanzi aluhlaza (ngokungafaniyo nonxweme lwePasifiki olukwilizwekazi), ngakumbi i-Isla Gámez ne-Isla Bolaños.
Ukuloba: IGulf yasePanama yaseChiriqui yenye yeendawo eziphambili zokuloba ezemidlalo emanzini anetyuwa ehlabathini! Indawo ekude yetropiki, ikhaya leentlanzi ezingaphezu kwama-20 zePelagic kunye neInshore game fish
IBoquete kunye neVolcan: eyaziwa ngokuba ziindawo eziphakamileyo, uya kufumana uhambo olumnandi lwemozulu entsha, ukubukela iintaka ngeyona ndlela ilungileyo, iVolcan Baru, irafting yamanzi amhlophe, amasimi ekofu. Ufumana iindawo zokutyela ezintle kule ndawo nje 1:30 hrs uqhuba usuka eSand Dollar Villa.
Indawo encinci ekhuselekileyo enesango kunye nabamelwane abanobuhlobo. Sibekwe kwindawo engasese, ngoko uya kuva kusasa iinkawu ze-hawler kwaye ngamanye amaxesha uya kuzibona kwigadi yethu. Iintlobo ezininzi zeentaka, kuquka iingcungcu eziza kutya kwindawo yamachibi kunye nezikhwenene ezichitha ubusuku emithini ekufutshane.
Ulwandle lusenzela thina ubukhulu becala ngaphandle kweKrisimesi, iveki engcwele kunye neecarnavales ekuya kufuneka ukuba wabelane ngazo nabantu abambalwa basekhaya. Sikwibhayi ekufutshane ngoko ke amaza mancinci kwaye lunxweme olukhuseleke kakhulu ukuqubha. Ilungile kwiKayak, kwaye xa uceliwe sinokukubonelela ngekajak ephindwe kabini ukuze uyonwabele.
Abalobi abangamachule bahamba elunxwemeni yonke imihla kwaye xa bebuya malunga nentsimbi yesi-4pm unokuthenga okulotyiweyo kosuku kunye nelobster entsha.
Siyakuthanda ukusingathwa, nangona sinika undwendwe lwethu ukuzimela okupheleleyo kunye nobumfihlo, sihlala sifumaneka ngefowuni, ku-whatsapp okanye ngokobuqu. Siyazi kakuhle le ndawo, sinonxibelelwano olubanzi nabasebenzi bokhenketho esinokubelana nabo.
Siyakuthanda ukusingathwa, nangona sinika undwendwe lwethu ukuzimela okupheleleyo kunye nobumfihlo, sihlala sifumaneka ngefowuni, ku-whatsapp okanye ngokobuqu. Siyazi kakuhle le nd…